विश्वकप विशेषः कसको सपना पूरा होला ? क्वाटरफाइनलमा भिड्ने ८ टिम यी हुन्, सूचिसहित – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकप विशेषः कसको सपना पूरा होला ? क्वाटरफाइनलमा भिड्ने ८ टिम यी हुन्, सूचिसहित
२०७५, २० असार बुधबार
काठमाडौं, असार २० । रसियामा जारी विश्वकप फुटबलमा अन्तिम ८ मा पुग्ने टिमको छिनोफानो भइसकेको छ । अब सबैको चाँसो अन्तिम ४ मा को-को टिम प्रवेश गर्न सक्लान् ? यो पटक अन्तिम ८ को यात्रामा अनुमान कम गरिएका टिमले पनि प्रवेश पाएका छन् । यसले गर्दा आगामी खेल निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा छ ।
यो संस्करणमा उपाधीका दाबेदार मानिएका अर्जेन्टिना, जर्मनी, प्रोर्चुगल, स्पेनलगायतका टिम अन्तिम आठमा छैनन् । पटकपटकका विश्वकप विजेता टिम अन्तिम आठमा नहुँदा यो पटक नयाँ टिमले उपाधी जित्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।
अन्तिम आठमा पुग्न सफल टिमध्ये ब्राजिल, उरुग्वे, फ्रान्स, इंग्ल्याण्डले मात्रै विश्वकपको उपाधी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । बाँकि चार टिम स्वीडेन, बेल्जियम, रुस र क्रोएसियाले उपाधी जित्न सकेका छैनन् । के यी ४ टिमले यो पटक उपाधी जितेर नयाँ इतिहास कोलार्न ? यो प्रश्नको जवाफ पर्खन अब धेरै दिन छैन ।
विश्कप जित्न ठूलै सपना देख्नुपर्छ । त्यहि सपना बोकेर रुसमा प्रवेश गरेका ३२ मिट मध्ये अहिलेसम्म ८ टिम मात्रै बाँकि छन् । बाँकि टिम जन्मभूमिको यात्रा गरिसकेका छन् ।
क्वाटर फाइनलमा पुग्न यी ८ टिमको संघर्षपूर्ण यात्र खूब रोचक छ । रोचक हुनुको प्रमुख कारण अहिलेका स्टार खेलाडीको टिमलाई हराउनु ।
क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्ने टिम मध्ये उरुग्वे एक हो । उसले अन्तिम आठमा पुग्नका लागि रोनाल्डोको पोर्चुगललाई हराएको हो । महान् खेलाडी रोनाल्डोको सपना ध्वस्त पार्न सकेकोमा उरुग्वे विश्वकप जित्ने ठूलो विश्वास पालेर बसेको छ ।
यस्तै, फ्रान्सले अर्का महान् खेलाडी मेसीको टिम अर्जेन्टिलाई हराउँदै अन्तिम ८ को स्थान सुरक्षित गरेको हो । अर्का स्टार खेलाडी नेइमारको टिम भने अघि बढ्न सफल भयो । ब्राजिलले मेक्सिकोलाई अन्तिम १६ मा २-० ले पन्छाउँदै क्वाटरफाइनलमा स्थान पक्का गर्न सफल भयो । यो जितले यो समयका स्टार खेलाडी मध्ये एक नेइमार रुस विश्वकपमा बाँकी रहे ।
यस्तै, एसियाली देश जापानको क्वाटरफाइनल सपना चकनाचुर पार्दै युरोपेली देश र यो विश्वकपमा राम्रो गरिरहेको बेल्जियम अन्तिम ८ मा आएको छ । बेल्जियमले जापानलाई ३–२ ले पाखा लगाएको हो ।
यता विश्वकप खेल्ने ३२ देश मध्ये बरियतामा सबैभन्दा पुछारमा रहेको आयोजक रुसले जारी विश्वकपमा सबैलाई चकित पार्दै आएको छ । अन्तिम १६ मा उसले ८ वर्षअघिको विश्व विजेता स्पेनलाई पाखा लगायो । निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल १-१ को बराबरी भएपछि टाइब्रेकरमा रुसले स्पेनलाई ४-३ ले हराउँदै क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
यसैगरी क्रोएसिया र डेनमार्कबिचको खेलमा पनि टाइब्रेकरबाटै निर्णय लिनु पर्‍यो । निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेलमा १-१ को बराबरी भएपछि पेनाल्टी सुटआउट भयो । त्यसमा क्रोएसियाले डेनमार्कको चुनौती ३-२ ले पार गर्‍यो । स्वीट्जरल्याण्डलाई १-० ले स्तब्ध पार्दै स्वीडेनले पनि अन्तिम ८ मा स्थान बनाएको छ । यसैगरी दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बियाको सपना युरोपेली देश इंग्ल्याण्डले चकनाचुर पारेको छ । निर्धारित र थप गरिएको समयमा १-१ को बराबरी भएपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरबाट लिइयो ।
त्यसमा ग्यारेथ साउथ गेटको टिमले चार वर्षअघिका सर्वाधिक गोलकर्ता जेम्स रोड्रिग्वेज रहेको टिम कोलम्बियालाई ४-३ ले हरायो । चोटका कारण रोड्रिग्वेज मंगलबार राति भएको इंग्ल्याण्डसँगको खेलमा मैदानमा थिएनन् ।
क्वाटरफाइनलमा कसको भिडन्त कोसँग ?
उरुग्वे भर्सेस फ्रान्स असार २२- गते, बेलुका पौने ८ बजे
ब्राजिल भर्सेस बेल्जियम असार- २२ गते, राति पौने १२ बजे
स्वीडेन भर्सेस इंग्ल्याण्ड असार- २३ गते, बेलुका पौने ८ बजे
रुस भर्सेस क्रोएसिया असार- २३ गते, राति पौने १२ बजे
ट्याग्स: Fifa world cup 2018
कोरोना भाइरसः ९ को मृत्यु, चार सय ४० जना पीडित
राष्ट्रिय आयोजना सरकारको प्राथमिकतामाः मन्त्री नेम्बाङ
४४४ किलोका युवक १०० किलोको श्रीमतीको खोजीमा !
बिग बास लिगः मेलबर्नले पायो १६३ रनको लक्ष्य, सन्दीप विकेट लिन असफल
बीबीएलः यस्तो रह्यो आज सन्दीपको तेस्रो ओभर
शौच गर्न गएकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा वडासचिव पक्राउ
बिग बास लिगः दोस्रो ओभरमा पिटिए सन्दीप